Abantu baseYurophu abakholelwa ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuvela kumuntu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ivame kakhulu, inkulu futhi, impela, ibonakala kuwo wonke umhlaba womhlaba, kunabantu abathatha isisindo somuntu kulo mdlalo wonke.
Njengoba uDonald Trump ethathe isinqumo sokuhoxa Esivumelwaneni saseParis mayelana nokuguquka kwesimo sezulu, ukuqwashisa kanye nesidingo sokuthatha isinyathelo ngokumelene nesimo sezulu sikhulile. Kodwa-ke, imithwalo yemfanelo umuntu akholelwa ukuthi isenzo kanye nomsuka wokuguquka kwesimo sezulu kusatshalaliswa kubonakala kungachazwa kahle. Kuthiwani ngabantu abakholelwa ukuthi asinacala ekushintsheni kwesimo sezulu?
Abantu baseYurophu bathatha umthwalo wokushintsha kwesimo sezulu
Kwenziwe inhlolovo yabantu baseYurophu abayi-10.000 XNUMX futhi kukhombisa ukuthi iningi lalezi zakhamizi libukela phansi iqhaza labantu ekudaleni ukuguquka kwesimo sezulu. Bangu-46% kuphela abakholelwa ukuthi isandla somuntu yiso esibhekene nalolu shintsho lomhlaba jikelele, okuyincazelo esinikezwa yisayensi. Ebhekene nale ncazelo yesayensi, u-51% ukholelwa ukuthi ushintsho empeleni lubangelwa ukuvela kwemvelo (8%) noma luyinhlanganisela yezinto ezimbili ezedlule (42%) noma ngqo ukuthi ushintsho alukho (insalela engu-1 %). 2% abazi ukuthi baphendule bathini.
Kuyiqiniso ukuthi kunezifundo ezibonisa ukuthi kukhona ezinye izinguquko zesimo sezulu kuwo wonke umlando weplanethi yethu. Noma kunjalo, Ukushesha okwenzeka ngalo lolu shintsho esimweni sezulu akubangelwa nje kuphela isenzo semvelo. Ngumuntu okuthi, ngokusebenzisa inguquko yezimboni kanye nokwanda kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa, kubangele ukufudumala kwembulunga yonke okudala ushintsho esimweni sezulu eMhlabeni.
Kusimangazile ukuthi iSpain yizwe elazi kangcono le nkinga. Abangama-60% baseSpain bayazi ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kunemvelaphi yomuntu nokuthi siyimbangela yakho konke. Lolu cwaningo lukhombisa ukuthi bangu-18% kuphela abantu baseYurophu abakholelwa ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kuyinkinga enkulu ebhekene nomhlaba namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Abantu baseYurophu abakholelwa ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kwenziwa ngumuntu